ရှီကျင့်ဖိန် - ခေတ်သစ်ခရီးတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသူ - Xinhua News Agency
ရှီကျင့်ဖိန် - ခေတ်သစ်ခရီးတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသူ
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းတွင် အထူးနှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်သော ၂၀၂၁ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး ရှီကျင့်ဖိန်၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည်များပြားလျက်ရှိခဲ့ပေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ဇူလိုင် ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် Fuping ကောင်တီ၊ Longquanguan မြို့နယ်၊ Luotuowan ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများထံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်နေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ် Ankang မြို့၊ Pingli ကောင်တီ၊ Laoxian မြို့နယ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးနေသည့် ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန့်မြို့ရှိ ဟောဆန်ဆန်းဆေးရုံ၌ ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် လူနာများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား စကားပြောနေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ ပြည်သူ့ခန်းမကြီးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွင်း ဆုတံဆိပ်ရရှိသူများအား ဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်တီးနေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ်၊ Niubeiliang အမျိုးသား သဘာဝကြိုးဝိုင်းရှိ Qinling တောင်တန်းများ ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း လေ့လာနေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်ရှိ Sanya မြို့ရှိ ရေတပ်ဆိပ်ကမ်းတွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂရုံးတွင် “လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း အတူတကွ တည်ဆောက်ကြစို့” ဟူသော မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည့် ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဆိုင်ရာ တရုတ်-အာဖရိက အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ CPC သမိုင်းပြတိုက်ရှိ ပြခန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ပါတီကတိသစ္စာပြု တိုင်တည်နေသော ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် အခြား CPC ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော လီခဲ့ချန်၊ လီကျန်းဆူး၊ ဝမ်းယန်၊ ဝမ်ဟူနင်း၊ ကျောက်လဲ့ကျိ၊ ဟန်ကျိန့်နှင့် ဝမ်ချီဆန်းတို့အား ဇွန် ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) လွန်ခဲ့သော လများအတွင်း ရှီသည် ပါတီ၏ ရာစုနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတစ်ခု၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း၊ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး၌ အသင့်အတင့် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော လူ့အသိုက်အဝန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေး ကြေညာခြင်း၊ တိဗက်ဒေသသို့ စစ်ဆေးရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အာကာသစခန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အာကာသယာဉ်မှူးများနှင့် စကားပြောဆိုခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လာမည့် သီတင်းများတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရှီသည် ပါတီ၏အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ၆ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရေးကြီးအစည်းအဝေးတွင် CPC ၏ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ အဓိကအောင်မြင်မှုများနှင့် သမိုင်းဝင် အတွေ့အကြုံများဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် အထင်ကရ အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့က ကာလရှည်ကြာသမိုင်းကြောင်းနှင့် နိုင်ငံစီမံအုပ်ချုပ်ရေး၏ ရှင်းလင်းမှုကို ဂုဏ်ပြုပြောကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ CPC သည် နှစ်ပေါင်း ၇၂ နှစ်ကြာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာဏာရပါတီအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရှီသည် CPC ဦးဆောင်မှု၏ ပင်မဖြစ်သည်။ ၎င်းမတိုင်မီက ကိုယ်စားပြု အကြီးအကဲများအဖြစ် မော်စီတုန်း၊တိန့်ရှောင်ဖိန်၊ ကျန်ဇီမင်းနှင့် ဟူကျင်တောင်တို့က ဗဟိုစုပေါင်းဦးဆောင်မှုမျိုးဆက်များဖြင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် CPC ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရချိန်မှစ၍ ရှီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သူ၊ အတွေးအမြင်နှင့် စိတ်ခံစားမှု လေးနက်သူ၊ အမွေအနှစ်ကို ဆက်ခံသူဖြစ်သော်လည်း တီထွင်ဆန်းသစ်ရန် ရဲဝံ့သူနှင့် အမြော်အမြင်ရှိသူအဖြစ် မြင်တွေ့ရပြီး မမောနိုင်မပန်းနိုင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ကတိပြုထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အင်အားကြီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်လာကာ အားကောင်းသောခေတ်သို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း Channel News Asia က ဖော်ပြထားသည်။
ခေတ်သစ်ခရီးတွင် ရှီသည် သမိုင်းကြောင်းရေးဆွဲပုံဖော်ရာတွင် ပင်မပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်မှာ ဧကန်မုချပင်ဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရာတွင် ၎င်းက ပါတီကို မည်သို့ဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။ ကမ္ဘာ့အလယ်စင်မြင့်ထံ တရုတ်နိုင်ငံကို မည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်နည်း။ ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးက ရှီကို လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်အကြာကာလကဲ့သို့ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
စက်တင်ဘာလတွင် နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ်၊ Gaoxigou ကျေးရွာသို့ စစ်ဆေးလောလာ့ရေးခရီး သွားရောက်စဉ် ရှီက ကောက်ပဲသီးနှံများကို စစ်ဆေးရန် လယ်ကွင်းများ၌ ရပ်နားခဲ့ပြီး လယ်ကွင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ရွာသားများနှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒေသန္တရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ပါးရေး အောင်မြင်မှုများကို ရှီက ချီးကျူးပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့သည့် Gaoxigou သည် ယခုအခါ ရပ်ရွာအမာခံများနှင့် ကျေးရွာသူရွားသားများ၏ မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် စည်ပင်ဝပြောသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။
ဆန်ရှီးပြည်နယ်ရှိ Gaoxigou ကျေးရွာမှ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ခန့် ကွာဝေးသော လျန်ကျားဟဲကျေးရွာတွင် ရှိနေစဉ် ၁၉၇၄ ခုနှစ်က ပါတီသို့ ရှီ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က လျန်ကျားဟဲကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်က ရှီသည် အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသော “ပညာတတ်လူငယ်” တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Loess ကျေးလက်ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာငယ်လေးတွင် နောက်ထပ် ၇ နှစ်နေထိုင်ခဲ့ကာ နေ့စားအလုပ်ပြီးဆုံးပါက ၎င်း၏ ကျောက်ဂူနေအိမ်လေးသို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ရိုးရှင်းသော ရွံ့စေးအိပ်ရာပေါ်တွင် အိပ်စက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ထိပ်တန်းရာထူးသို့ မတက်လှမ်းမီ နှစ်ပေါင်း ၃၈ နှစ်ကြာ ပါတီ၏ ရာထူးအစဉ်အဆက် အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် မြောက်များစွာသောတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
CPC သို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ရှီသည် လျန်ကျားဟဲကျေးရွာ ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုအပေါ် ရွာသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနက် တစ်ဦးက ရှီသည် “တာဝန်ကျေပွန်စွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သလို အကြံဉာဏ်များစွာရှိပြီး ပြည်သူများနှင့် အမာခံများကိုလည်း စည်းရုံးနိုင်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့သော အချိန်များအား ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လျက် ရှီသည် ကျေးရွာသူရွာသားများအတွက် “စားကောင်းသောက်ဖွယ်များ” ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံး ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီသည် လူမှုအသိုက်အဝန်းနေအိမ်ဟု ခေါ်ဆိုသူတိုင်း၏ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရန် ရေတွင်းများ၊ လှေကားထစ်စိုက်ခင်းများ၊ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့လှောင်ကန်များ အပါအဝင် စီမံကိန်းများစွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၎င်း “ရိုးရှင်းလှသော” စီမံကိန်းများသည် ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ ဘဝများ၊ လုပ်ငန်းနှင့် စိတ်သဘောထားများကို သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
လူငယ်လေး ရှီသည် အားလပ်ချိန်များတွင် စာအုပ်များကို ဖတ်နိုင်သမျှ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားဖတ်ရှုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Das Kapital စာအုပ်ကို သုံးကြိမ် ဖတ်ရှုခဲ့ပြီး ၎င်းအလေးအနက်ထား စဉ်းစားချက်များကို မှတ်စုစာအုပ် ၁၈ အုပ်ဖြင့် မှတ်သားထားခဲ့သည်။
၎င်း၏ဖခင် Xi Zhongxun သည် CPC ဗဟိုခေါင်းဆောင် ပထမမျိုးဆက်များအနက် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရှီသည် ဖခင် ရှီထံမှ ဉာဏ်ပညာ လှုံ့ဆော်မှုကို မကြာခဏ ရရှိခဲ့သည်။ နှစ်သက်စရာကောင်းသော ကျောင်းစာမှ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရရှိခဲ့ပြီး ငယ်ရွယ်သော အသက်အရွယ်မှပင် တော်လှန်ရေးမီးရှူးတိုင်ကို ဆောင်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ရှီသည် ပေကျင်းမြို့ရှိ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော ချင်းဟွာ တက္ကသိုလ်(Tsinghua University) သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ်ရှိ ကျိန့်သင်းနယ်မြေသို့ မပြောင်းရွှေ့မီ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၊ အထွေထွေရုံးတွင် ပထမဆုံး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ကျိန့်သင်းနယ်မြေသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအား အောက်မေ့လျက် ရှီသည် ပြည်သူများအကြား အခြေခံလူတန်းစားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရှီက “သူ့ရဲ့မိဘတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသလို ပြည်သူတွေကို ချစ်မြတ်နိုးလိုကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျိန့်သင်းနယ်မြေ ပြီးနောက် ရှီ၏ နိုင်ငံရေးသမားဘဝသည် ကမ်းရိုးတန်းပြည်နယ်များဖြစ်သော ဖူကျန့်ပြည်နယ်နှင့် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်နှင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့ပြသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြန်သည်။ မည်သည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့စေကာမူ ပြည်သူများနှင့် နီးကပ်မှုရှိသော ဆက်ဆံရေးက အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျိန့်သင်းနယ်မြေရှိ ၎င်း၏ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော မိတ်ဆွေများနှင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအကြောင်း နှလုံးသားနှင့်ရင်း၍ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ရှီက လျန်ကျားဟဲမှ ရွာသားတစ်ဦး ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက်လည်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ကူညီပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီသည် ၎င်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ပြည်သူများအပေါ် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့သည်။ ကျဲ့ကျန်းတွင် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအနက် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကျန်းဟုန်မင်းက ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၌ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ချိန် ရှီ၏ စိတ်သဘောထားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်ကို သတိတရ မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ရသူ ၁၀ ဦးမှာ ၉ ဦးက ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှ ပြည်သူတွေရဲ့ အပြည့်အဝ ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိဆောင် လုပ်ဖို့ လိုနေပါသေးတယ်” ဟု ကျန်းက ရှီ၏ ညွှန်ကြားချက်များအား ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လျက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီ၏ ပြည်သူဗဟိုပြုအတွေးအမြင်က COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း အဘယ်ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ပြည်သူများအသက်ကယ်တင်နိုင်ရေးအတွက် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သနည်းဆိုခြင်းကို ရှင်းပြထားကြောင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ဖူတုံခရိုင်ရှိ China Executive Leadership Academy မှ ပါမောက္ခ Liu Jingbei က ဆိုသည်။
ရှီသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် CPC ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးဗျူရို၊ အမြဲတမ်းကော်မတီတွင် ရုံးထိုင်ရန် ပေကျင်းမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရှီသည် ပါတီတည်ဆောက်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုရေးရာများနှင့် ၂၀၀၈ ပေကျင်း အိုလံပစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှု အပါအဝင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၌ ကြီးကြပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ်ရှိလာပြီဖြစ်သော ရှီသည် ပါတီ၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံးရထားသို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်လခန့်အကြာ အေးမြသော ဆောင်းရာသီတွင် ဟဲပေပြည်နယ်ရှိ ဆင်းရဲသောကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ဒေသခံများနှင့်အတူတကွ ထိုင်လျက် ရှီက ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေများအကြောင်း မေးမြန်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထံတွင် စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဂွမ်းစောင်များ လုံလောက်မှုရှိပါက ဆောင်းရာသီ၌ နွေးထွေးစွာနေထိုင်ရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာသားအချို့မှာ ရည်ရွယ်ချက်များ ရောက်ရှိရေး ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရချိန်တွင် ၎င်း၏ စိတ်နှလုံး ညှိုးနွမ်းခဲ့ရကြောင်း ရှီက ပြောခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် ရှီ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကမ်ပိန်း၏ ၉ နှစ်မြောက်လည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကမ်ပိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းတွင် ကျယ်ပြန့်မှုအရှိဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကမ်ပိန်းသည် ယုတ်လျော့သွားမည့်လက္ခဏာများ မရှိပေ။
ယခုနှစ်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ၂၀ ကျော်အား အပြစ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိုအစိုးရ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ယန္တရား၌ ဝန်ကြီးအဆင့် တာဝန်ရှိသူဟောင်းတစ်ဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရသလို နောက်ထပ်တစ်ဦးသည်လည်း အပြစ်ပေးခံနေရကြောင်း သိရသည်။
ရှီက CPC ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် နိုင်ငံသည် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
“အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခွင့်ပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ပါတီပြိုကွဲဖို့နဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ကျဆုံးဖို့ဆီ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ အချက်အလက်တွေက သက်သေဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရှီက ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၉ နှစ်အတွင်း ဝန်ကြီးအဆင့် တာဝန်ရှိသူ ၄၀၀ ကျော်အား အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ CPC ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို၊ အမြဲတမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးနှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်း နှစ်ဦးတို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ တရားခံပြေး ၈,၃၀၀ ကျော်ကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၂၀ မှ နေရပ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
“အရေးပါတဲ့အချိန်မှာ ရှီက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်” ဟု ပြည်ပမီဒီယာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် ပြောကြားထားသည်။
ရှီက “ အာဏာအလွဲသုံးစားမှုကို စနစ်တကျစစ်ဆေးရေး ” ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ရှီသည် အမျိုးသား ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကို ထူထောင်ရာတွင်လည်း ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အစိုးရပိုင်ကဏ္ဍ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည်လည်း ကြီးကြပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်း ကြီးကြပ်မှုအောက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
CPC ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရှီသည် ပါတီအတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ၂၀၀ ခန့်ကို အသစ်ဖော်ထုတ်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပါတီဝင်များ၏ အကြံဉာဏ်များနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ခိုင်မာစေရန်နှင့် ထိထိရောက်ရောက် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန် ပါတီအနှံ့ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးကမ်ပိန်း ၅ ခုကိုလည်း ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီသည် ပါတီအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေးကြီးကြောင်း အလေးထားမှတ်ယူထားခဲ့သည်။ CPC အဖွဲ့ဝင်များထံမှ တောင်းဆိုထားသော မှတ်ချက်များအား ယခုအခါ ပါတီ အမျိုးသားကွန်ဂရက် အစီရင်ခံစာများ၊ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးများတွင် သုံးသပ်ထားသော အထောက်အထားများ၊ ပါတီ၏ အဓိအချက်အလက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမူဝါဒများအဖြစ်သို့ ပေါင်းစပ်ဖြည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လမတိုင်မီ CPC အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်သည် ၉၅ သန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ လူဦးရေထက် ၁၀ သန်းကျော်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများက ပါတီသည် ပိုမို၍ စည်းစနစ်ကျနပြီး ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ကာ အင်အားပြည့်ဝလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားလျက်သည်။
ရှီသည် CPC အတွင်း ကြီးမားသော ထောက်ခံအားပေးမှု ယခင်ကထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံအရေး လေ့လာသူ Neil Thomas က ဆိုသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ၆ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ရှီ၏ ဂုဏ်အဆင့်ကို CPC ဗဟိုကော်မတီနှင့် ပါတီတစ်ခုလုံး၏ ပင်မအဖြစ် ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။
အားကောင်းသော ဗဟိုဦးဆောင်မှုမရှိဘဲလျက် CPC သည် ပါတီတစ်ခုလုံး၏ ဆန္ဒကို စည်းလုံးရန် လူမျိုးစုများအားလုံးရှိ ပြည်သူများအကြား စုစည်းရန်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ “သမိုင်းကြောင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာအသစ်တွေနဲ” ကြီးမားတဲ့ ရုန်းကန်မှုတွေမပါဘဲနဲ့ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပါတီသမိုင်းကြောင်းအင်စတီကျုနှင့် CPC ဗဟိုကော်မတီ စာပေဌာန သုတေသနအဖွဲ့ဝင် Wang Junwei က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ခေတ်သစ်အတွက် တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ဆိုင်ရာ ရှီကျင့်ဖိန်၏ အတွေးအမြင်ကို ၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသားကွန်ဂရက်တွင် တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ အတွေးအမြင်သည် CPC အခြေခံဥပဒေနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေ၌ ထည့်သွင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
မော်စီတုန်းနှင့် တိန့်ရှောင်ဖိန်တို့ကဲ့သို့ပင် ရှီသည် မာ့ခ်ဝါဒကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဆက်စပ်မှုကိုလည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း CPC ဗဟိုကော်မတီ ပါတီကျောင်း (National Academy of Governance) မှ ပါမောက္ခ Xin Ming က ပြောခဲ့သည်။
အင်အားတောင့်တင်းသော တရုတ်နိုင်ငံ တည်ဆောက်ခြင်း
၁၈၄၀ ပြည့်နှစ် ဘိန်းစစ်ပွဲပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံသည် တစိတ်တစ်ပိုင်း ကိုလိုနီနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ပြည်ပအင်အားစုများက အနိုင်ကျင့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် အားနည်းမှုကို ခံစားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အဲဒီအချိန်က တရုတ်နိုင်ငံဟာ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတာပါ” ဟု ရှီက သမိုင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လျက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲရန် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် CPC ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ပါတီစာသင်ကျောင်းမှ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သူ Han Qingxiang က နိုင်ငံအားသစ်လောင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် ပါတီတည်ထောင်ခြင်း၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပြီးနောက် ခေတ်သစ် စသည့် အရေးပါသော သမိုင်းမှတ်တိုင် လေးခုဖြင့် အထိမ်းအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရှီ ရွေးချယ်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက် ရှီက အမျိုးသားအားသစ်လောင်းခြင်း၏ “တရုတ်နိုင်ငံ အိပ်မက်” ကို တင်ပြခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ် တော်လှန်ရေး နှစ်ပေါင်း ၁၁၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် ရှီက ၃၅ မိနစ်ကြာ မိန့်ခွန်းထဲတွင် “အားသစ်လောင်းခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကို ၂၅ ကြိမ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အားသစ်လောင်းခြင်းသည် မဟာဗျူဟာမြောက်ပုံစံနှင့် အလုပ်ကြိုးစားခြင်း နှစ်လုံးအတွက် လိုအပ်ကြောင်း ရှီက ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။ ရှီသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သူအဖြစ် ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းတွင်ပင် အရေးကြီးသော အစည်းအဝေးပွဲ ၅၀၀ ကျော်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခရီးစဉ်သည် ထိုနှစ်ရှိ သီတင်းပတ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ရှိ စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်များလည်း ပါဝင်သည်။ အဓိက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များမူကြမ်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ရှီအတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန် အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ရေကူးခြင်းအတွက် အချိန်ရအောင် စီစဉ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းအလေ့အထမှာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် လုပ်ဆောင်သည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး ပါတီ၊ အစိုးရနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရေးရာများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လုံလောက်သော သက်လုံကို ရရှိစေသည်။ ပို၍အရေးပါသည်မှာ ရှီသည် ဦးတည်ချက်အတွေးအာရုံဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပျော်ရွှင်မှုက အလုပ်ကြိုးစားခြင်းကတစ်ဆင့် ရရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရှီသည် လယ်ယာစိုက်ခင်းများ၊ တံငါသည်ကျေးရွာများ၊ လယ်သမားများ၏ နေအိမ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်ငယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ စာသင်ကျောင်းများသို့ မကြာခဏသွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိပြီး ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန် ဝက်ခြံများနှင့် သန့်စင်ခန်းများသို့လည်း စစ်ဆေးရေးသွားရောက်ခဲ့သည်။
“ရှီက သူ့ကို လှည့်စား လိမ်ညာဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ အသိပညာတွေကို လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ သူ့ကို အစီရင်ခံရတယ်” ဟု ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်တွင် ရှီနေထိုင်ခဲ့စဉ်က လုပ်ဖောင်ဆောင်ဖက်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Zhang Mengjin က ပြောခဲ့သည်။
ရှီသည် လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်တာအတွင်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း မြောက်များစွာ၏ စစ်ဆေးခြင်းကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အစောပိုင်းက ယီမင်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားချိန်က ယင်းနိုင်ငံ၌ သောင်တင်နေသော တရုတ်အမျိုးသား အမြောက်အများကို ကယ်ထုတ်နိုင်ရန် ရေတပ်ကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံအား ကုန်သွယ်ရေးစစ် ဆင်နွှဲရန် အစပျိုးချိန်၌ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ကို မလိုလားကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မည်သူ့ကိုမျှ ကြောက်ရွံ့မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟူသော မဟာဗျူဟာကို စီစဉ်ဖန်တီးခဲ့ပေသည်။
နှစ်နိုင်ငံအတွက် မှန်ကန်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “ကျယ်ပြန့်သော ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဟာ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် လုံလောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရှီက ဆိုသည်။
ဒိုင်ယုကျွန်း ရေပိုင်နက်တွင် ပုံမှန်ကင်းလှည့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမည်ခံ တောင်တရုတ်ပင်လယ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှောင်လွှဲခြင်း၊ တရုတ်-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းမှုများ အဖြေရှာခြင်း၊ ပြည်ပတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော တရုတ်ပြည်သူများ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေး အဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်းများတွင် ရှီက မဟာဗျူဟာမြောက် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး နည်းဗျူဟာကျကျ စီစဉ်လျက် လိုအပ်ပါက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြားဝင်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်က လူမှုရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော ဟောင်ကောင်တွင် “တစ်နိုင်ငံ၊ စနစ်နှစ်မျိုး” ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် “အရောင်တော်လှန်ရေး” သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ဖြိုခွင်းရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ရပ်နားခြင်းနှင့်အတူ ရှီသည်လည်း အိပ်မပျော်သောညရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်မူ ရှီက နိုင်ငံ၏ တုန့်ပြန်မှုအတွက် ဆွေးနွေးရန် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ရှီက ပြည်သူများ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဟူပေပြည်နယ်နှင့် ဝူဟန့်ရှိ ထွက်ပေါက်လိုင်းများကို တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။ အချိန်က မည်သို့ တင်းကြပ်စွာကိုင်တွယ်ချဉ်းကပ်ခြင်းဟာ အလားအလာရှိတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းကို ပြသခဲ့သည်။
ရှီသည် “ငန်းမည်း” နှင့် “မီးခိုးရောင်ကြံ့” ကို ပါတီဝေါဟာရအတွင်းသို့ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပါတီကျောင်း ပါမောက္ခ Han က ခေတ်သစ်၏ အဓိကအချက်အဖြစ် အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
“နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံကို စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာ ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါပဲ” ဟု ရှီက ပြည်ပနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး၏ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ မိမိကိုယ်ကို မြှုပ်နှံထားဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို နောက်ချန်ထားရစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟုဆိုသည်။
CPC ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်အားသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ပြီးနောက် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ စီးပွားရေးနောက်ပြန်ဆွဲခြင်းဖိအား ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကွာဟမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု၊ လူမှုရေးတင်းမာမှု အပါအဝင် ပြဿနာများမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ကြံ့ကြံ့ခံမှုအချို့နှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ ထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းသည်လည်း ပိုမိုလိုအပ်ပေသည်။
ရှီသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသော၊ ညှိနှိုင်းမှုရှိသော၊ အစိမ်းရောင်ရှိပြီး ပွင့်လင်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဖြင့် ခေတ်မီ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲခဲ့ပေသည်။
ထိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရူပါရုံသည် ဂေဟဗေဒစနစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် အကျိုးမရှိသော တိုးတက်မှုအပေါ် အမှီပြုသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထောင်ချောက်မှ ဆိုရှယ်လစ်တရုတ်နိုင်ငံကို ဦးဆောင်ရန်၊ နိုင်ငံအား အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ ပြောင်းလဲရန်နှင့် ချမ်းသာသူများမှာ ပို၍ချမ်းသာလာပြီး ဆင်းရဲသူများမှာ ပို၍ဆင်းရဲသွားခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
အလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နက်ရှိုင်းရေးအတွက် ဗဟိုကော်မရှင်ဦးဆောင်မှုဖြင့် တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒအား ထပ်လောင်းလျက် မြေပြင်သစ်ဖော်ဆောင်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာကို ရှီက ကြေညာခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် မြေပြင်အသုံးပြုမူဝါဒများ အသုံးပြုခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် ပါတီတည်ဆောက်ခြင်း၊ တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ မိသားစု စီမံကိန်း၊ ငွေကြေးနှင့် အခွန်မူဝါဒများ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာနှင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေး စသည့် အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ်များသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယင်းအနက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်မှာ အဖွဲ့အစည်းများအား ခေတ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာလရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုများအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းအနှစ်သာရက တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးတက်ခြင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏စနစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ခေတ်မီတိုးတက်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ကြီးမားသော အခက်အခဲများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို ကိုင်တွယ်ရန်နှင့် အတားအဆီးများကို လျှော့ချရန် ရှီက ၎င်းကိုယ်တိုင် အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ရသည်။
၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ တတိယမြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး သဘောတူညီချက် မူကြမ်းနှင့်တာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်သည် အလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နက်ရှိုင်းမှုရှိစေရန် ဗဟိုပြုထားကြောင်း သိရသည်။
မူကြမ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက ရှီသည် သုတေသနကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အံ့ဖွယ်ဆောင်ရွက်ချက်များစွာ လွယ်ကူချောစေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် “ဈေးကွက်ကို အရင်းအမြစ် ခွဲဝေရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွင့်ပေးရမည်” ဟူသောအချက်သည် ရှီ၏ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘဲ အဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ပြောင်းလဲရန် ရှီသည် ညစ်ညမ်းမှုရှိသော စက်ရုံများ၏ ပြဿနာ ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနီးကပ်ရင်ဆိုင်ခြင်းကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှည်ဆုံးမြစ် ယန်ဇီမြစ်တွင် ငါးဖမ်းခြင်းကို ၁၀ နှစ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ရှီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပန်ဒါကြီးမျိုးများ၊ နှာခေါင်းလန်မျောက်များ (snub-nosed monkeys) နှင့် အခြား တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ နေအိမ်ဖြစ်သော Qinling တောင်တန်းများတွင် အပန်းဖြေအိမ်များ တရားမဝင်တည်ဆောက်ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားချက် ၆ ခု ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူများစွာအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မှုများသည် သိသာထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့နေရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လေအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နေ့ရက်များ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြို့များတွင် ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး နှင့် စီရင်စုအဆင့်ရှိသော နေရာများ၌ ယင်းထက်ပို၍များပြားခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးရှိရေမျက်ပြင် အချိုးအစားမှာလည်း ၈၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ ၈၉.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း ၎င်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကျေနပ်အားရလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ပိုမိုပွင့်လင်းစေခဲ့ပေသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ပထမဆုံး လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု ရှေ့ပြေးဇုန်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ အလားတူဇုန် အရေအတွက် ၂၁ ခုအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဥရောပနိုင်ငံအငယ်စားလေးနှင့် ခန့်မှန်းခြေအရွယ်အစားတူညီသော ဟိုင်နန်ကျွန်းတစ်ခုလုံး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်စာရင်းကိုလည်း ထပ်မံလျှော့ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အချို့သောနိုင်ငံများသည် ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးများကို တည်ဆောက်နေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်များစွာအား လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရှီကိုယ်တိုင် အစပျိုးခဲ့သော တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲသည်လည်း နိုင်ငံအဆင့် ကျင်းပသော ပြပွဲများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်မကုန်မီ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၇ နှစ်တာကာလအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ် ၂,၄၈၅ ခုကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်များနှင့် မစ်ရှင်များအား လျာထားသည့်အတိုင်း အခြေခံအားဖြင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်လျက်ရှိကြောင်း ရှီက ကြေညာခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီ (GDP) သည် ယမန်နှစ်ကထက် ပျမ်းမျှ ၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏ ပျမ်းမျှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယွမ် ၁၀၀ ထရီလီယံကျော် ပမာဏ သို့မဟုတ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဆယ်ပုံခုနစ်ပုံခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအညွှန်းကိန်း၌ အဆင့် ၁၂ နေရာတွင်ရှိကြောင်း၊ ဂျပန်၊ အစ္စရေးနှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများထက် ပို၍မြင့်မားလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်တန်းလက်ခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ စားသုံးသူဈေးကွက်လည်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ခေတ်သစ်တွင် အထင်ရှားဆုံး အောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး လူတန်းအားလုံးတွင် အလယ်အလတ် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်း ဟု အမည်ပေးထားသော “ပထမဆုံး ရာစုနှစ်ပန်းတိုင်” ပြည့်မီခြင်း ဖြစ်ကြောင်း CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ပါတီသမိုင်းကြောင်းနှင့် စာပေအင်စတီကျု့ရှိ နောက်ထပ် သုတေသနအဖွဲ့ဝင် Liu Ronggang က ပြောကြားခဲ့သည်။
အသင့်အတင့် ကြွယ်ဝခြင်း သို့မဟုတ် တရုတ်ဘာသာစကားတွင် “Xiaokang” ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ရှေးခေတ်တရုတ်သီချင်းစာအုပ်များမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သူများက နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် ကောင်းမွန်သော ဘဝကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြရန် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးထားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်မှုအရှိဆုံး လူမှုရေး လုံခြုံရေးစနစ်နှင့် အကြီးမားဆုံး အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသောအုပ်စုရှိသည်။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၉ နှစ်အတွင်း ပြည်သူ သန်း ၁၀၀ ခန့်ကို အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အခြေအနေမှ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ရှီက ပါတီဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ရည်မှန်းထားသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ပါးရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည့်မီသောကျေးရွာများအား စာရင်းယူထားရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရှီသည် အဆင်းရဲဆုံးဧရိယာ ၁၄ ခုနှင့်ထိစပ်နေသောဧရိယာများအနက် တစ်ခုစီသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချခြင်းကို စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဧကန်စင်စစ်မူ ကမ်ပိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း လူပေါင်း ၁,၈၀၀ ကျော် အသက်ပေးခဲ့ရသော ကျဆုံးသူရဲကောင်းများရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှီသည် စစ်တပ်ကိုလည်း ဘက်စုံပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မော်စီတုန်းက ထူထောင်ခဲ့သည့် “ပါတီက သေနတ်ကို ကွပ်ကဲသည်” ဟူသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားလျက် ရှီသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုနှင့် ကွပ်ကဲမှုစနစ်၊ အရွယ်အစား၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းမှုများ၌ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စစ်တပ်သည် တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်ရှိရမည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းများသို့လည်း ပုံမှန်စစ်ဆေးရေးသွားရောက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပြည်တွင်းထုတ် လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုနှင့် မျိုးဆက်သစ် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး ရေငုပ်သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျ ဥပဒေပညာရှင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအရေး ကျွမ်းကျင်သူ Gerd Kaminski က ၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပြီးနောက် တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အယူအဆ အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါသောကိစ္စရပ်များအားလုံးတွင် ဗဟိုလမ်းညွှန်မှုစည်းမျဉ်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူပင် ခေတ်သစ်တွင် တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုင်ရာ ရှီကျင့်ဖိန်၏ အတွေးအမြင်မှာ ထင်ရှားကြောင်း Han Qingxiang က ပြောခဲ့သည်။ “ဒါဟာ သမိုင်းတွင်တဲ့ အမျိုးသား အားသစ်လောင်းခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ဦးဆောင်နေပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်”
သမ္မတ ရှီသည် ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ရှေ့တန်း၌ ထားရှိသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီက ရှီသည် ခရီးစဉ်ပေါင်း ၄၁ ခုဖြင့် နိုင်ငံ ၆၉ ခုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒါဗို့စ်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်သည့် ပထမဆုံးသော တရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပခရီးစဉ်များ သွားရောက်ရာတွင် “ဇိမ်ခံခြင်း” ဖြင့် မကုန်ဆုံးစေဘဲ “အကျိုးရှိခြင်း” အဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့သည်။
ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွင်း ရှီ၏ အစီအစဉ်သည် အလွန်ပင်အချိန်ကျပ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်သာနေနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ မွေးနေ့ကိုပင် ပြည်ပခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်း ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်များ လုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးဟာ တရုတ်ပြည်သူများရဲ့ ဘဝ ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အသစ်ပြင်ဆင်ဖို့နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြှင့်တင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
တူရကီနိုင်ငံ၊ အစ္စတန်ဘူလ်မှ ပညာရှင် Altay Atli က စီးပွားရေး သို့မဟုတ် သံတမန်ရေးသာမက နိုင်ငံတကာရေးရာများတွင် ရှီ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ပါဝင်မှု၏ အသွင်ပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အတူ အဓိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာခြင်း သက်သေပင် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ရှီသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် “လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ခြင်း” အယူအဆကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
၎င်း၏တိကျသောအမြင်အပေါ် ပြင်ဆင်ချိန်တွင် ရှီက နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအား မိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တိုးတက်ရေး၊ ခေတ်မီလူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖလှယ်မှုများနှင့် ခိုင်မာသော ဂေဟစနစ်တည်ဆောက်ခြင်းကို မြှင့်တင်သွားသင့်ကြောင်း၊ “အကျိုးစီးပွားတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက အားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်” ဟူသော ဆိုရိုးစကားကို ကိုးကားလျက် ရှီက အဆိုပြုခဲ့သည်။
လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုသည် ကောင်းမွန်သော နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက “တစ်ဦးတစ်ယောက်စီရဲ့ လွတ်လပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဟာ အားလုံး လွတ်လပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေဖြစ်တယ်” ဟူသော မာ့ခ်ဝါဒ အတွေးအခေါ်နှင့် “သဟဇာတဖြစ်မှု” ဟူသော တရုတ် အယူအဆကို အမွေဆက်ခံထားသော သဘောထားဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ မော်စီတုန်း၏ “ကမ္ဘာသုံးခုသီအိုရီ” နှင့် တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ “ကမ္ဘာ့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” တို့အား ထောက်ခံလျက် CPC က နိုင်ငံခြားရေးရာ အဆိုပြုချက်ကို မကြာသေးမီက တင်သွင်းခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ တုန့်ပြန်မှုသည် အပြုသဘောဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရှီသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက Palace of Nations ၊ ဂျီနီဗာရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးတွင် ၎င်း၏ အမြင်အား တင်ပြခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ သံတမန်များနှင့် အနုပညာရှင်များက ၄၇ မိနစ်အတွင်း လက်ပြထောက်ခံမှု ၃၀ ကျော်ဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ဤအယူအဆအရ ရှီသည် အပြန်အလှန် အကျိုးကျေးဇူးရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် တိုးတက်မှုရရှိရေး စည်းမျဉ်းအပေါ် အခြေခံထားသည့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသို့ ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကို အဆိုပြုခဲ့သည်။
“မည်သို့သော နိုင်ငံတကာဥပဒေသနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်က ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပြီး နိုင်ငံအားလုံးက ပြည်သူတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိသနည်း။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကတစ်ဆင့် နိုင်ငံအားလုံးက ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံအချို့အားဖြင့် မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ရှီက အားပေးထောက်ခံထားတဲ့ အဓိကနိုင်ငံဆက်ဆံရေး မူဘောင်မှတစ်ဆင့် အလားတူ စည်းမျဉ်းဟာ အလုံးစုံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ မျှတမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံရာခြင်းမှာ ရိုးသားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမယ်မှာဖြစ်သလို အင်အားကြီးခြိမ်းခြောက်မှုကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အကြိမ်များစွာ အလေးထားပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတိုင်မီ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ နှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးထားရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက နိုင်ငံ ၃၀ ခန့်သာ ရှိခဲ့ရာမှ သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗဟိုအမေရိကနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသရှိ နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်” ဟု ရှီက ဆိုသည်။
အောက်တိုဘာလက ဂျာမနီနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကဲနှင့် ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် ရှီက ၎င်းအား မိတ်ဆွေဟောင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ “တရုတ်ပြည်သူများက အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေရင်းချာဆက်ဆံရေးအဖြစ် မှတ်ယူကြောင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းချာကို ဘယ်တော့မှ မေ့သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သင်တို့အတွက် အမြဲတမ်းတံခါးဖွင့်ထားကြောင်း” ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနှစ်တွင်ပင် ရှီက လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းအား ပူးတွဲတည်ဆောက်ရန် ကမ္ဘာကြီးအား ပထမဆုံး တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် (BRI) ကိုလည်း အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမတိုင်မီ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၁၇၂ ခုခန့်က ယင်းမူဘောင်အောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် ၂၀၀ ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အစီရင်ခံစာအရ BRI စီမံကိန်းများသည် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ ပြည်သူ ၇.၆ သန်းကို ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသင့်အတင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ ပြည်သူ ၃၂ သန်းကို ဆွဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ရှီသည် ဂရိနိုင်ငံရှိ Piraeus ဆိပ်ကမ်း၊ ဆာဗီးယားနိုင်ငံရှိ Smederevo သံမဏိစက်ရုံ၊ ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ၊ မင့်စ်မြို့ရှိ တရုတ်-ဘယ်လာရုစ် စက်မှုဥယျာဉ်အပါအဝင် BRI စီမံကိန်းများစွာထံသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွင် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရှီက အရေးပါသော ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် ကတိကဝတ်တစ်ခု ကမ္ဘာအားပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လျှော့ချမှုကို အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သလို ၂၀၆၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်ရောက်ရှိလာရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတုန့်ပြန်မှု အထောက်အကူပြုခြင်းအတွက် ကမ္ဘာက ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Kevin Rudd က ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် လေးနှစ်အကြာက ပဲရစ်သဘောတူညီချက်အား တရုတ်နိုင်ငံက အခိုင်အမာပံ့ပိုးရေးအတွက် ရှီက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပံ့ပိုးမှုမပါရှိဘဲ ယင်းသဘောတူညီချက်မှာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရှိလာမည် မဟုတ်ကြောင်း Rudd က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များကို ကူညီရေး လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန် ရှီက ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် ဒေသတွင်း အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး၊ နျူကလီးယားအရေးမှသည် ကပ်ရောဂါတုန့်ပြန်ရေးအထိ ဖြေရှင်းရာတွင် အရေးပါသော တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းလက်ချင်းတွဲထားဖို့လိုပါတယ်။ မျက်ရည် မကျစေဘဲ နံရံတွေကို တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အကြာက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ မငြိမ်သက်မှုများကြားမှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အညှာတာကင်းမဲ့စွာ ရုပ်သိမ်းသွားချိန်က ရှီသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ တည်ငြိမ်စွာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအား ပံ့ပိုးရန်၊ နိုင်ငံအတွင်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်နှင့် အာဖဂန်ပြည်သူများအား ကူညီရန် ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့သလို ရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ရှီက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၁၄ ခုထံ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ကိရိယာများ ပံ့ပိုးခဲ့သလို နိုင်ငံ ၃၄ နိုင်ငံသို့ ဆေးအဖွဲ့ ၃၇ ဖွဲ့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ရှီသည် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုခဲ့သလို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာသို့ ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြောင်း၊ COVAX အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကူညီရန်လည်း ကတိပြုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံသည် မယုံကြည်နိုင်လောက်ဖွယ်သော ခရီးကိုနှင်ခဲ့ပြီး အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးဒဏ်ခံရသောနိုင်ငံသည် လက်ရှိ အသင့်အတင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရှီသည် လူသားမျိုးနွယ်အား ထောက်ပံ့ကူညီသော အောင်မြင်မှုအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအားဖြင့်သာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက် ကုလသမဂ္ဂ ၂၀၃၀ အစီအစဉ်မှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးပန်းတိုင်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
၇၃ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌ Maria Fernanda Espinosa Garces က ရှီအပေါ် ၎င်း၏ သဘောထားကို ဖော်ပြရာတွင် ရှီအား “နိုင်ငံစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ BRI နဲ့ လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း စသဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသူ “သမ္ဘာရင့် ခေါင်းဆောင်” အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
CPC သည် “ရာစုနှစ် နှစ်ခု” ဟုခေါ်ဆိုသော ပန်းတိုင်တစ်စုံမှတစ်ဆင့် အမျိုးသားအားသစ်လောင်းခြင်းကို ပြည့်မီရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်အတွင်း ပါတီ၏ အဆင့်မြင့်ဆုံး ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရှီသည် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းကို ပြည့်စုံစေရန် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင်အစီအစဉ်၏ ဒုတိယခြေလှမ်း ပုံစံကိုလည်း ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ပထမအချက်မှာ ခေတ်မီဆိုရှယ်လစ်သည် ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင် “အခြေခံအားဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်” မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာမူ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၁ ရာစုနှစ်လယ်မတိုင်မီ ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော၊ ခိုင်မာတောင့်တင်းသော၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျသော ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်မားသော၊ သဟဇာတဖြစ်ပြီး လှပသော ခေတ်မီသော မဟာဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော လမ်းပြမြေပုံများသည် ဆက်စပ်လွှမ်းခြုံမှုရှိသော ပန်းတိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ ရှီအနေဖြင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၂၅) အတွက် ပါတီ၏ခေါင်းဆောင်မှု အဆိုပြုချက်များနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာတွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် ၂၀၃၅ ခုနှစ် ကာလရှည် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အဆိုပြုချက်များအား ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
CPC ၏ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်သည် “သမိုင်းဝင်အံ့ဩဖွယ်” အဖြစ်၊ အားသစ်လောင်းထားသော တရုတ်နိုင်ငံသည် အရုဏ်တက်လာခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ရှီက ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ချီတုံချတုံဖြစ်ရန်အချိန်မရှိကြောင်း ရှီက သတိပေးခဲ့သည်။ “ဒီလို အရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တန့်လို့၊ တုံ့ဆိုင်းလို့၊ စောင့်ဆိုင်းနေလို့မရဘူး” ဟု ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသား အားသစ်လောင်းခြင်းသည် ပန်းခြံထဲတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ရောက်ရှိလာမည့် စမ်းသပ်မှုများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်းသာ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သတိပေးခဲ့သည်။
“ကြီးမားတဲ့အိပ်မက်က ကြီးမားတဲ့ ရုန်းကန်မှုကို တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ရမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် လာမည့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ ၆ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသည် အရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်သလို ပါတီ၏ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ သမိုင်းကြောင်းတွင် အဓိက အောင်မြင်မှုများနှင့် သမိုင်းဝင် အတွေ့အကြုံကို ဆွေးနွေးသွားကြမည်ဖြစ်သည်။
“နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ရုန်းကန်မှုအတွင်း CPC အနေဖြင့် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံကို စုဆောင်းခဲ့ပြီး အရေးပါသော ဥပဒေသများကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သလို စီမံအုပ်ချုပ်မှုသီအိုရီများ တိုးတက်ခဲ့ပြီး အသိဉာဏ်ပညာလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ အဖိုးတန်ရတနာဟာ ပါတီရဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Han Qingxiang က ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း CPC သည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၁ ခုနှစ်တို့တွင် သမိုင်းဝင်ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုသာ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပါတီတစ်ရပ်လုံး ရှင်းလင်းသော သဘောတူညီချက်နှင့် တောင့်တင်းခိုင်မာသော စည်းလုံးမှုဖြစ်စေသည့် အရေးပါသော သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး သုံးသပ်ချက်များ ရေးဆွဲခဲ့သည်။
“ပါတီရဲ့ အရင်က သမိုင်းဝင်ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက သဘောတူညီချက်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ မစ်ရှင်အသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့ အားကောင်းလာခြင်း၌ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒါက မကြာမီကျင်းပမယ့် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အချက်ပဲ” ဟု သုတေသနအဖွဲ့ဝင် Wang Junwei က ပြောခဲ့သည်။
သမိုင်းကြောင်းသည် ယခုနှစ် CPC အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် ရေပန်းစားသောစကားလုံးအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေသည်။ ပညာရေးကမ်ပိန်းက ပါတီသမိုင်းကို နားလည်သဘောပေါက်သော အမာခံများကို ကူညီခဲ့ကြောင်းနှင့် CPC ပြတိုက်သစ်ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် ရှီနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များသည် ပြတိုက်သို့ လေ့လာရေးသွားရောက်ခဲ့ရာ ချင် (Qing) အစိုးရက မမျှတသော Shimonoseki သဘောတူစာချုပ်ဖြင့် စစ်လျော်ကြေးပေးရန်အတွက် ထုတ်ထားသော ကတိစာချုပ်များ၊ ဘရပ်ဆဲလ်မှ ကားလ် မာ့ခ်၏မှတ်စု လက်ရေးစာမူ၊ ပါတီတည်ထောင်ချိန်က CPC အဖွဲ့ဝင်၅၈ ဦး စာရင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစောပိုင်းနှစ်များက ထုတ်လုပ်ခဲ့သောကား၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်ပုံစံငယ် စသည့် ခင်းကျင်းပြသထားမှုများကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ပြခန်းသည် ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိတိုင်အောင် အရေးပါသော သမိုင်းဝင်လမ်းဆုံလမ်းခွများအားလုံးကို ချိတ်ဆက်လားသည့် အချိန်ကာလအစဉ်အလိုက်ဖြင့် အဆုံးသတ်ဖော်ပြထားသည်။
“သမိုင်းဆိုတာ အဆုံးသတ်မရှိသလို ပြီးဆုံးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး” ဟု ရှီက CPC တည်ထောင်ခြင်း ၉၅ ကြိမ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ညီလာခံတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “CPC နဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုရေးစနစ် ရှာဖွေရေး ကူညီရေး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ် အမြဲတမ်း ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်”
၎င်းတို့၏ လေ့လာရေးအဆုံးသတ်ပြီးနောက် ရှီနှင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များသည် ပါတီအလံရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုခဲ့သည်။
“ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကျန်ရှိသောဘဝအား ကွန်မြူနစ်ဝါဒအတွက် တိုက်ခိုက်သွားပါမည်” ဟု ရှီက ကျမ်းသစ္စာကို ဦးဆောင်တိုင်တည်လျက် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-06 08:27:22|Editor: huaxia
“I will fight for communism for the rest of my life,” Xi said, leading the oath. ■
Photo : Xi Jinping delivers an important speech ataceremony marking the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Ju Peng)
-Xi Jinping visits impoverished villagers in Luotuowan Village of Longquanguan Township, Fuping County, north China’s Hebei Province, Dec. 30, 2012. (Xinhua/Lan Hongguang)
– Xi Jinping inspectsaprimary school of Laoxian Township, Pingli County of the city of Ankang, northwest China’s Shaanxi Province, April 21, 2020. (Xinhua/Xie Huanchi)
– Xi Jinping speaks withapatient and medical workers by video link at Huoshenshan Hospital in Wuhan, central China’s Hubei Province, March 10, 2020. (Xinhua/Ju Peng)
– Xi Jinping applauds for the personnel awarded with medals duringagrand gathering to celebrate the 40th anniversary of China’s reform and opening-up at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Dec. 18, 2018. (Xinhua/Xie Huanchi)
– Xi Jinping learns about ecological conservation of the Qinling Mountains at Niubeiliang National Nature Reserve, northwest China’s Shaanxi Province, April 20, 2020. (Xinhua/Ju Peng)
– Xi Jinping boards the aircraft carrier Shandong and reviews the guard of honor atanaval port in Sanya, south China’s Hainan Province, Dec. 17, 2019. (Xinhua/Li Gang)
– Xi Jinping deliversakeynote speech “Work Together to BuildaCommunity of Shared Future for Mankind” at the United Nations Office in Geneva, Switzerland, Jan. 18, 2017. (Xinhua/Rao Aimin)
– Xi Jinping chairs the Extraordinary China-Africa Summit on Solidarity against COVID-19 and deliversakeynote speech in Beijing, capital of China, June 17, 2020. (Xinhua/Ding Haitao)
– Xi Jinping leads other CPC and state leaders Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan to review the Party admission oath after visiting an exhibition on CPC history at the Museum of the CPC in Beijing, capital of China, June 18, 2021. (Xinhua/Li Xueren)
ဆူဒန်နိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ်က ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြုကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို